हाच्छ्यु आउँदा किन बन्द हुन्छ हाम्रो आँखा ? यस्तो छ रोचक तथ्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हाच्छ्यु आउँदा किन बन्द हुन्छ हाम्रो आँखा ? यस्तो छ रोचक तथ्य
एजेन्सी । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाच्छ्यु आउदा हामी सबैको आँखा बन्द हुने गर्दछ। त्यसको पछाडिको कारण भने निकै रोचक छ। हाच्छ्यु आउनु शरीरको पाचन प्रक्रियाको एक हिस्सा हो। यसले शरीरलाई स्वस्थ बनाइ राख्नका लागि निकै सहयोगी हुने गर्दछ।
हाच्छ्युसँग सम्बन्धीत रोचक तथ्य
चिसोमा छौँ भने पनि हाच्छ्यु आउने गर्दछ। तर हाच्छ्यु आउनुको मुख्य कारण अरु पनि हुने गर्दछ। जसलाई आज हामी बताउँदैछौँ। यस्ता छन् हाच्छ्युसँग सम्बन्धीत केही रोचक तथ्य
हाच्छ्यु आउँदा किन बन्द हुन्छ हाम्रो आँखा ?
जब हाम्रो नाकमा कुनै चीज प्रवेश गर्न खोज्दा दिमागको एक भाग, जुन हाच्छ्युको मुख्य रुपबाट केन्द्रित हुने गर्दछ। यो भाग हाम्रो दिमागको तलको भागमा हुने गर्दछ, जसले तिब्र रुपमा हाम्रो दिमागलाई संकेत दिने काम गर्दछ। जसका कारण हाम्रो घाँटी, आँखा र मुख बन्द हुने गर्दछ।
त्यसपछि तुरुन्त छातीको मांसपेशीसम्म जाने गर्दछ र घाँटीको मांसपेशिमा आराम हुने गर्दछ। जसको परिणाम स्वरुप एक हावा हाम्रो मुख र नाकबाट बाहिर निस्किने गर्दछ, जसलाई हामी हाच्छ्यु भन्ने गर्दछौँ।
हाच्छ्यु आउनु मानिन्छ राम्रो
हाच्छ्यु आउनु स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। हाच्छ्यु गर्दा शरीरमा रहेका हानीकारक तत्व बाहिर निस्किने गर्दछन्। यसलाई प्रतिरोधी तन्त्रको प्रक्रियामा पनि निकै महत्वपूर्ण भाग मानिन्छ। त्यसैले हाच्छ्यु आउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ।
किन सुतेको समयमा हाच्छ्यु आउँदैछन् ?
प्राय देखिने गर्दछ की हाच्छ्यु आयो भने तपाईलाई निद्रा आएको हुँदैन्। यसको मतलव सुतेको समयमा प्राप्त व्यक्तिमा हाच्छ्यु आउनु असम्भव जस्तै मानिन्छ। किनकी यो समयमा नसा आरामको अवस्थामा हुने गर्दछ। जब तपाई सुत्नुहुन्छ तब हाच्छ्युसँग जोडिएका सबै नसालाई आराम मिल्ने गर्दछ, त्यसैले निद्रामा हाच्छ्यु आउँदैन्।